शनिबार, कात्तिक १५, २०७७ लाइभ
फ्रेन्च ओपन टेनिस जोकोभिचले ग्रिक खेलाडीसँग सेमिफाइनल खेल्ने विश्व नम्बर एक नोभाक जोकोभिच १० औं पटक फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। सर्बियाली स्टार जोकोभिचले स्पेनका पाब्लो क्यारिनो बुस्टालाई ४-६, ६-२, ६-३, ६-४ ले पराजित गर्दै अन्तिम चारको यात्रा तय गरेका हुन्। एजेन्सी
अमेरिकी भेट्रान सेरेनाले खेल छाडिन्, टिनएजर काेकाे हारिन्
अमेरिकी टिनएजर कोको गौफ र भेट्रान खेलाडी सेरेना विलियम्स एक दिनै फ्रेन्च ओपन टेनिसबाट बाहिरिएका छन्। पेरिसमा जारी प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा कोको इटालियन प्रतिदन्दी मार्टिना टेभिसनसँग पराजित भइन्। उनी ४-६, ६-२, ७-५ ले पराजित भएकी हुन्। एजेन्सी
बेलायतमा आइसोलेसन नबस्नेलाई १० हजार पाउण्ड जरिवाना
त्यस्तो अवस्थामा कोही बाहिर निस्कियो भने उसले १० हजार पाउण्ड तिर्नुपर्नेछ। यो भनेको १५ लाख २७ हजार ६ सय १७ नेपाली रुपैयाँ हो। सरकारको यो नियम २८ सेप्टेम्वरदेखि लागु हुनेछ। एजेन्सी
ओसाका र अजारेन्का कस्ले हत्याउला यूएस ओपन उपाधि?
महिलातर्फ आज राति हुने यूएस ओपनकाे फाइनलमा जापानकी ओसाका नाओमी र बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्काबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै पूर्व विश्व नम्बर वरीयता भएका खेलाडी हुन्। एजेन्सी
ट्रम्पका चुनावी ट्वीट निषेध गर्न नयाँ नियम लागु गर्दै ट्वीटर
चुनावका बेला गलत सूचना प्रवाह गर्नबाट रोक लगाउन ट्वीटरले आफ्ना नियमहरूलाई झन कडा बनाउन लागेको छ। अमेरिकामा हुन लागेको चुनावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटहरुलाई फ्याक्ट चेक गर्न झनै कडा नियम बनाउन लागिएको हो। ट्वीटरले, चुनावमा गलत सुचना प्रवाह हुनसक्ने र त्यस्ता सूचनाले मानिस अलमलिन सक्ने भन्दै त्यस्ता सुचनाहरुलाई कि फ्याक्ट चेक गरेर हटाउन सकिने नियम बनाउन लागेको हो। एजेन्सी
ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित
राष्ट्रपटि ट्रम्प इजरायल र यूएईबीच महत्वपूर्ण शान्ति सम्झौता गर्न सफल भएकोमा नोबल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित गरिएको वासिङटन पोष्टले जनाएको छ। एजेन्सी
खोप लगाएकाहरू बिरामी परेपछि अक्सफोर्डले परीक्षण रोक्यो
अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा यो परीक्षण चलिरहेको छ। यी देशका करिब ३० हजार व्यक्ति यो खोप परीक्षणमा सहभागी छन्। एजेन्सी
सर्विया र पाकिस्तानले पनि चिनियाँ खोप परीक्षण गर्ने, दश देशमा परीक्षण हुँदै
सर्वियाले नेशनल बायोटेकको वुहान र बेइजिङ युनिटले तयार गरेका दुई भ्याक्सिन परीक्षण गर्नेछ भने पाकिस्तानले बेइजिङ युनिटको भ्याक्सिन परीक्षण गर्न सहमत भएको रोयटर्सले जनाएको छ। एजेन्सी
कमजाेर हुँदै डलरकाे बादशाह, रुस र चीनले चाले याे रणनीति
पछिल्ला वर्ष रुस र चीनले द्विपक्षीय व्यापारमा डलरकाे प्रयाेग जबर्जस्त तरिकाबाट कम गरेका छन्। डलरमा आफ्नाे निर्भरता कम गर्न रूस र चीन एकसाथ आइरहेका छन्। केही विशेषज्ञकाे भनाइ छ कि यसबाट दुवै देशबीच 'वित्तीय गठबन्धन' हुनसक्छ। एजेन्सी
टिकटकपछि भारतमा पब्जीसहित थप ११८ एपहरु प्रतिबन्ध
‘यो कदमपछि भारतका करोडौं मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षा हुनेछ। भारतको साइबर स्पेसको सुरक्षा हुनेछ’ मन्त्रालयले भनेको छ। यस्ता एपहरुले भारतीय नागरिकका डाटा चोरी गरेको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लोपटक गलवान क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच भएको भीडन्तपछि पनि भारतले टिकटकसहित ५९ एपहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। एजेन्सी
ह्वावेमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धले चीनकै आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो धक्का
यद्यपि, सान्जेनले आफू चीनको मुख्य आर्थिक सहरमा परेको ४०औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। तर, अझै यो सहरको चमक पहिलेजस्तो रहिरहन गाह्रो छ किनभने चीन आफैं ‘अशान्त युग’ मा पुगेको छ। एजेन्सी
पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच फेरि झडप
भारतीय सेनाले यो घटनाबारे प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरोमार्फत विज्ञप्ति जारी गरेर धारणा राखेको छ। भारतीय सैनिकले ‘पंन्गोंग त्सो लेक’ मा चिनियाँ सैनिकको उत्तेजित कदम रोकिदिएको’ दाबी गरेको छ। एजेन्सी
चार हजार कर्मचारीकाे कटौतीमा कोकाकोला, बिक्रीमा भारी गिरावट
कोरोना भाइरस महामारीका कारण पेयपदार्थ बिक्रीमा ह्रास आएको भन्दै कोकाकोलाले पहिलो चरणमा अमेरिका, क्यानडा र पुएर्टोरिकोमा ४ हजार कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव ल्याएको हो। सुरुमा इच्छुकहरूको रोजगारी कटौती हुनेछ भने त्यसपछि अनिच्छुकको पनि। एजेन्सी
राजीनामा गर्दै आबे, कारण पेटको रोग
यो खबरले जापानको सेयर बजारमा २.१२ अंकले गिरावट आएको छ। र, उनको राजीनामासँगै सत्तारुढ एलडिपीमा नेतृत्व हात पार्ने दौड पनि सुरु हुनेछ। पार्टी नेता जो हुन्छ ऊ नै प्रधानमन्त्री बन्ने छ। एजेन्सी
सेभियाकाे सान, छैटा‌ै‌‍‍‍‍‍‍‌‌‌पल्ट बन्याे युराेपा कप च्याम्पियन
स्पेनिस टोली सेभिया युरोपा लिग फुटबलको बादशाह बनेको छ। सेभियाले शुक्रबार राति छैटौंपल्ट युरोपा लिग जितेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबीच जर्मनीको कोलोग्नमा भएको फाइनलमा सेभियाले इटालियन टोली इन्टर मिलानलाई ३-२ गोलले पराजित गरेको थियो। एजेन्सी
बहिनीलाई अझ शक्तिशाली बनाए किमले
जासुसी संस्थालाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘सर्वोच्च नेता किम जङ-अनले अझै पनि पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिरहनुभएको तर विस्तारै आफ्नी बहिनीलाई शक्तिशाली बनाउने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।’ एजेन्सी
टिकटकमा भिडियो बनाउँथिन्, ‘अभद्र’ कपडा लगाएको भन्दै सरकारले जेल हालिदियो
टिककटमा भिडियो अपलोड गर्ने समूहका पाँच युवतीलाई इजिप्ट सरकारले दुई वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएपछि अहिले उनीहरू जेलमा छन्। साथै उनीहरूलाई २० हजार डलर जरिवाना पनि सुनाइएको छ। एजेन्सी
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको दसैं कस्तो भो? सुन्दर खनाल